Bobby Moynihan – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Grown Ups2(2013) Unicode ဒီGrown ups22013 ကားလေးကတော့ဟာသ မငျးသားကွီးAdam Sandlerရဲ့ 2010ကGrown ups ကားလေးရဲ့အဆကျပါ Adam Sandlerဆိုရငျတော့ ဟာသကွိုကျပရိသတျကွီးတို့မသိဘဲနမှောမဟုတျပါဘူး နာမညျမသိရငျတောငျမှသူ့ကားတှကေိုတော့ရငျးရငျးနှီးနှီး တှဖေူ့းမှာပါ ကဲအညှနျးလေးကိုဆကျသှားရအောငျ ဒီကားလေးမှာတော့Adam Sandlerဖွဈတဲ့လနျနီဟာ သူရဲ့ဇာတိမွို့လေးမှာပွနျပွီးနထေိုငျနပေါတယျ Grown Ups 1 မှာအသကျကွီးကွီးအဘှားကွီးနဲ့ ယူထားတဲ့ရော့ကတော့ဒီကားမှာ သူ့မိနျးမနဲ့ကှဲပွီး ကြောငျးကားမောငျးနပေါတယျ ရော့ကို ဒီ2မှာတော့ အခနျးနညျးနညျးပဲတှရေ့မှာပါ တခွားသူငယျခငျြးတှေ ဖွဈတဲ့ လနျမှနျဆော့နဲ့မကျကငျဇီတို့ကလညျးကလေးတှေ လညျးကွီးပွငျးလာပွီးတော့ ဟဈဂငျကတော့သူ့ရဲ့သား ဆိုပွီးတော့ ရထားနဲ့ရောကျလာခဲ့ပါတယျ တဈနမှေ့ာ လနျမှနျဆော့ကို သူတို့ငယျငယျကခုနျခနြကြေ ခြောကျကမျးပါးမှာခုနျခခြိုငျးဖို့သှားရငျးနဲ့ Twilightထဲက ဝံပုလှမေငျးသားဂကျြကော့ ဖွဈတဲ့အနျဒီတို့အဖှဲ့နဲ့တှပွေီ့းအရှကျတှကှေဲခဲ့ရပါတယျ ဂကျြကော့ Taylor Launterကိုတော့ဒီထဲမှာ ပေါတော တော ကောလိပျကြောငျးသားအဖွဈတှရေ့မှာပါ အနျဒီတို့အဖှဲ့ကိုဟဈဂငျရဲ့သားဖွဈသူကမကနြေပျ ဘဲအနျဒီတို့နတေဲ့နရောကိုဖကျြဆီးခဲ့ပါတယျ အနျဒီတို့ကလနျနီတို့လုပျတယျထငျပွီး လနျနီတို့ပါတီကို လာရောကျဖကျြဆီးပွီး နှဈဖှဲ့ခကြွပုံမြားကို ပရိသတျကွီး သှားမစိဘဲကွညျ့ရမှာပါ လနျနီအတှကျ သတငျးဆိုးလား သတငျးကောငျးလားလို့ ပွောရမဲ့နရေ့ောကျလာပါတယျ သူ့မိနျးမမှာကိုယျဝနျရှိနေ တာပဲဖွဈပါတယျ လနျနီကအစမှာတော့ဒီကလေးကိုမလိုခငျြပါဘူး နောကျပိုငျးမှာတော့သူလညျးကိုယျတိုငျဒီကလေးကို လိုလိုခငျြခငျြနဲ့ကွညျနူးစရာဇာတျသိမျးထားပါတယျ... Credit Review Zawgyi ဒီGrown ups22013 ကားလေးကတော့ဟာသ မင်းသားကြီးAdam Sandlerရဲ့ 2010ကGrown ups ကားလေးရဲ့အဆက်ပါ Adam Sandlerဆိုရင်တော့ ဟာသကြိုက်ပရိသတ်ကြီးတို့မသိဘဲနေမှာမဟုတ်ပါဘူး နာမည်မသိရင်တောင်မှသူ့ကားတွေကိုတော့ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဖူးမှာပါ ကဲအညွှန်းလေးကိုဆက်သွားရအောင် ဒီကားလေးမှာတော့Adam ...
IMDB: 5.4/10 130,754 votes
The Secret Life of Pets2(2019) The Secret Life of Pets2(2019) သည် IMDb 6.6/10 Rotten Tomatoes 57% Metacritic 55% Google users 90% ဒါရိုက်တာ Chris Renaud, Jonathan del Val တို့က ရိုက်ကူးထား၍ Brian Lynch က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ အသံသရုပ်ဆောင် Patton Oswalt, Kevin Hart, Harrison Ford တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… မက်စ် နဲ့ သူ့ရဲ့ အချစ်တော် မိတ်ဆွေများရဲ့ ဇာတ်လမ်းအဆက်ပါ သူတို့ရဲ့ ပိုင်ရှင်တွေက အလုပ် သို့မဟုတ် ကျောင်းကို နေ့တိုင်း ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် သူတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဘဝတွေ ...
The Secret Life of Pets2(2019) The Secret Life of Pets2(2019) သည် IMDb 6.6/10 Rotten Tomatoes 57% Metacritic 55% Google users 90% ဒါရိုက်တာ Chris Renaud, Jonathan del Val တို့က ရိုက်ကူးထား၍ Brian Lynch က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ အသံသရုပ်ဆောင် Patton Oswalt, Kevin Hart, Harrison Ford တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… မက်စ် နဲ့ သူ့ရဲ့ အချစ်တော် မိတ်ဆွေများရဲ့ ဇာတ်လမ်းအဆက်ပါ သူတို့ရဲ့ ပိုင်ရှင်တွေက အလုပ် သို့မဟုတ် ကျောင်းကို နေ့တိုင်း ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် သူတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဘဝတွေ ...
Monsters University (2013) Animation, Adventure, Comedy အမျိုးအစား ကျနော်အရမ်းကြိုက်တဲ့ Animation ဇာတ်ကားလေးပါ.. IMDb မှာ Ratings: 7.4/10 ရရှိထားပါတယ်. ဇာတ်လမ်းကတော့ မွန်းစတားတက္ကသိုလ်ရဲ့ခြောက်လှန့်ခြင်းမေဂျာမှာ ကြောက်စရာမကောင်းတဲ့ မိုက် ဆိုတဲ့မွန်းစတားကောင်လေးတယောက်ရဲ့ခြောက်လှန့်သူတယောက်အဖြစ် ကြိုးစားအားထုတ်ပုံကို ကလေးငယ်တွေအတုယူစရာကောင်းလှအောင်တွေ့ရမယ့်ဇာတ်ကားလေးပါ.. မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်သလို ကလေးရှိတဲ့ မိသားစုတွေဆိုရင်တော့ ကလေးငယ်တွေအငြိမ်ကြည့်မယ့်ဇာတ်ကားလေးပါ.. Credit Review
IMDB: 7.3/10 287,514 votes